Chikoro Bhazi Flips, Wiricheya-Akasungwa Vadzidzi Vakakuvadzwa
Posted on March 26, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Vatatu vanodiwa vadzidzi, mu mavhiripu, vakakuvara zvishoma. Mushure mekurohwa nemotokari, iyo Central Texas bhazi rechikoro rakakwenya padenga rayo.
Vakuru vane Copperas Cove Independent Chikoro cheDunhu vanoti vana vatatu, murindiri uye mutyairi webhazi vakakuvara zvishoma mukupaza kweChishanu masikati. Vashandi veEmergency vaifanira kucheka zvakagadzirirwa zvakagadzirirwa kusunungura vana.
Vakuru vanoti mukadzi aityaira mota aive zvekare kutakurwa kuchipatara cheKilleen kunotariswa, seyambiro.
Dhipatimendi reTexas rePublic Safety rinoti tsaona iyi yakaitika pamharadzano apo bhazi rekuchamhembe rakarohwa mota ikatadza kumira. Nekutenda pakange pasina kukuvara kukuru kune chero munhu aibatanidzwa.
Inonzwika yakafanana chaizvo nenyaya iyi kubva svondo rapfuura:
Chikoro Bhazi Rinoputika Nevana Mukati, 9 Yakakuvara
[hr] [btn link="http://www.nbcdfw.com/news/local/Three-Students-in-Mawiricheya-Are-Kurwadziwa-seChikoro-Bhazi-Flips-251710601.html" color="grey" target="_blank"]Verenga Chinyorwa Chekutanga[/btn]
'7.5 Quake Kubva kuGehena' Puente Makomo Mhosva Inotyisa